၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ဇူလိုင်အထိ ရခိုင်ပြည်တွင်း COVID-19 ဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ
August 21, 2020 AASYC 0
၁. ဖြန့်ဝေရသည့် ရည်ရွယ်ချက် ———————— အရေးပေါ် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး စီမံကိန်းများချမှတ်ရာတွင် မူဝါဒရေးဆွဲသူများ အနေဖြင့် အနေဖြင့် ကိုးကားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်တွင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များ အစည်းအရုံး (AASYC) မှ ၂၀၂၀ Read More
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ရခိုင်ပြည်အရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းသုံးသပ်ချက်
August 8, 2020 AASYC 0
၃။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်းသတင်းများမှ ရခိုင်ပြည်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ရှိချက်များ ၃.၁. နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များ ၃.၁.၁. ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (၁) စတုတ္ထအကြိမ် ၂၁-ရာစု ပင်လုံညီလာခံအား (၁၂.၀၈.၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၄.၀၈.၂၀) နေ့ အထိကျင်းပရန် စစ်တပ်ပါဝင်သည့် Read More
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ ရခိုင်ပြည်၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေကို AASYC အစီရင်ခံစာ တင်သွင်း
July 14, 2020 AASYC 0
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေကို ပုံမှန်သုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် (Universal Periodic Review – UPR)တွင် ရခိုင်ပြည်၌ ဖြစ်ပွါးလျက်ရှိသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC) မှနေ၍ (၀၉.၀၇.၂၀) ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီသို့ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ Read More
၃။ တွေ့ရှိချက်များ ************** ၃.၁. နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များ ———————————– (၁) ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး – ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ရခိုင်ပြည်၊ ချင်းပြည်၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်ရှိ ဒေသတချို့အား ချန်လှပ်၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးရှိ မြို့နယ်ပေါင်း (၃၃၀) Read More
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ရခိုင်ပြည်အရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းသုံးသပ်ချက်
June 2, 2020 AASYC 0
သုံးသပ်ချက်များ ************ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် ————————- (၁) ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းတွင် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်နှင့် NLD အစိုးရ/ပါတီတို့ ပူးပေါင်း၍ ANP ပါတီဝင်များနှင့် အမျိုးသားရေး အင်အားစုများအား ဖမ်းဆီးသည့် သဘော၊ ULA/AA မှ NLD ပါတီဝင်များအား ပြန်လည် လက်စားချေ ဖမ်းဆီးသည့်သဘော Read More
May 14, 2020 AASYC 0